သမိုင်းထဲက အမေ့လျော့ခံ အားကစား (သို့မဟုတ်) ဗန်တို | Thaing Wizard
Posted on March 21, 2013 by Aung Thu Htet	“မြန်မာ့သိုင်းပညာ သင်တန်းကျောင်း” ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်က ယိုင်နဲ့နေသလို ကျောင်းဝင်းထဲ မှာလည်း မြက်တွေက ခြေသလုံးမြုပ်မတတ်ရှည်လို့တောင် နေပါပြီ။ ရေညှိတွေဖုံးနေလို့ သိုင်းကသလို ဟန်ချက်ထိန်းပြီး လျှောက်နေရတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogleLinkedInTumblrPrintEmailLike this:Like Loading...
This entry was posted in Bando, Banshay, Martial Arts, Martial Arts Article, Thaing Byaung Byan and tagged ဗန်တို, ဗန်ရှည်, သိုင်းပြောင်းပြန်, ဆောင်းပါး by Aung Thu Htet. Bookmark the permalink.	2 thoughts on “သမိုင်းထဲက အမေ့လျော့ခံ အားကစား (သို့မဟုတ်) ဗန်တို”	Pingback: Myanmar Thaing Ancient Martial Arts Video | Thaing Wizard
Contact Detail	thaingwizard@gmail.com